Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Nahum 2
Nepali New Revised Version, Nahum 2
1 हे निनवे, एउटा छापामार तेरो विरुद्धमा बढ्‌दैछ। किल्‍लाको सुरक्षा गर्‌, बाटो राम्ररी हेर्‌, कम्‍मर कस्‌, तेरो पूरा बल लगा।
2 परमप्रभुले याकूबको गौरवलाई इस्राएलको श्रेष्‍ठताझैँ फेरि फर्काउनुहुनेछ, यद्यपि ध्‍वंसकहरूले तिनीहरूलाई उजाड़ पारेका छन्‌, र तिनीहरूका दाखका बोटहरू नष्‍ट पारेका छन्‌।
3 त्‍यसका सिपाहीहरूका ढालहरू राता छन्‌। त्‍यसका योद्धाहरूले गाढ़ा लाल पोशाक पहिरेका छन्‌। ती तयारी पारिएको दिनमा रथहरूका धातु चम्‍कन्‍छन्‌, सल्‍लोका भालाहरू उजाइएका छन्‌।
4 रथहरू सड़कमा खूब वेगसित हाँकिन्‍छन्‌, र चोकहरूमा तिनीहरू अगि-पछि गर्दै जोरले कुद्‌छन्‌। तिनीहरू जलिरहेका राँकाहरूजस्‍तै देखिन्‍छन्‌, तिनीहरू बिजुलीजस्‍तै वेगले कुद्‌छन्‌।
5 त्‍यसले आफ्‍ना चुनिएका सेनाहरूलाई हाजिर गराउँछ, तापनि उनीहरू आफ्‍नो बाटोमा धरमरिन्‍छन्‌। उनीहरू आतुरीसाथ सहरको पर्खालतिर दगुर्छन्‌। रक्षा गर्ने ढाल त्‍यसकै ठाउँमा राखिन्‍छ।
6 नदीका बाँधहरू खुला पारिन्‍छन्‌। दरबार ढल्‍छ।
7 यो अवश्‍यम्‍भावी छ, सहर निर्वासनमा लगिनेछ। त्‍यसका दासीहरू छाती पिट्‌दै ढुकुरहरूझैँ विलाप गर्छन्‌।
8 निनवेचाहिँ पानीको दहजस्‍तै छ, त्‍यसको पानी सुक्‍दैगइरहेछ। “पख्‌! पख्‌।”भनेर कराउँदा पनि कसैले पछि फर्केर हेर्दैन।
9 चाँदी लुट! सुन लुट! त्‍यसका सबै धन-सम्‍पत्तिको केही टुङ्गै छैन।
10 त्‍यो लूटपीट गरियो, लुटियो र नाङ्गो पारियो। हृदयहरू गल्‍छन्‌, घुँड़ाहरू काँप्‍छन्‌, र सारा शरीरमा पीडा छ, सबै चेहराहरू पहेँला-पहेँला हुन्‍छन्‌।
11 साना-साना सिंहहरूलाई खुवाउने गुफा खोइ? जहाँ सिंह र सिंहनी डमरुहरूसमेत नडराई हिँड्‌दथे।
12 आफ्‍ना डमरुहरूलाई प्रशस्‍त हुने गरी सिंहले शिकार मार्थ्‍यो, र त्‍यसकी सिंहनीको निम्‍ति पशुहरूलाई फहराउँथ्‍यो। त्‍यसले आफ्‍ना ओड़ारहरू शिकार गरेर ल्‍याएका पशुहरूले र आफ्‍ना गुफाहरू आफ्‍नो शिकारले भरपूर पार्दथ्‍यो।
13 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्‍छ, “म तेरो विरुद्धमा छु। म तेरा रथहरू धूवैधूवाँ हुने गरी जलाइदिनेछु, र तेरा जवान सिंहहरू तरवारको गाँस हुनेछन्‌। म तेरो लागि शिकार छोड्‌नेछैनँ, र तेरा समाचारवाहकका शब्‍द अब उप्रान्‍त सुनिनेछैनन्‌।”
Nahum 1 Choose Book & Chapter Nahum 3